အကြိက်ဆုံး ပို့စ် (၅) ခု TAG | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
အကြိက်ဆုံး ပို့စ် (၅) ခု TAG
August 29, 2007, 2:46 am Filed under: Lin Let Kyal Sin မမ s-potato က (၁၁)မီးငြိမ်းအောင် tag လုပ်လိုက်တာမို့ စဉ်းစားခန်းလေး ဖွင့်ပြီး ဒီပို့စ်ကို ရေးလိုက်ရပြန်တယ် .. ။ ခေါင်းစဉ်က အကြိုက်ဆုံးပို့စ် ၅ ခုတဲ့ .. ။ အမှန်အတိုင်းပြော၇ရင်တော့ ကိုယ်ရေးထားတာမို့ အကြိုက်ဆုံးရယ်တော့ မရှိပါဘူး .. ။ ခံစားချက်အစစ်အမှန်နဲ့ ပေါက်ကွဲထွက်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေကိုတော့ နည်းနည်းပိုသဘောကျတာပေါ့နော် … ။
၁) ပထမပို့စ်ကတော့ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ … ။
ဒီပို့စ်က ကျွန်မတို့အမိမြေမှာ မရှိတဲ့ လွတ်လပ်စွာဖန်တီးခွင့်ကို နှစ်နှစ်ကာကာ အလိုရှိတဲ့အကြောင်း ရေးထားတာပါ။ စာရေးခြင်းအပါအ၀င် အနုပညာဆိုတာ ဘောင်တစ်ခုနဲ့ သတ်မှတ်ထားလို့မရတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဖြန့်ကျက်ခြင်းပါ .. ။
၂ )ဒုတိယပို့စ်က I Hate CORRUPTION
ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက်အစစ် နဲ့ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်သင့်တာကို ပေါင်းရေးထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါ .. ။
၃) တတိယပို့စ်က ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ မုန်းသောအချက်များ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြည့်မရဆုံး အမုန်းဆုံးအချက်တွေကို ဖွင့်ဟထားတဲ့ပို့စ်တစ်ခုပါ .. ။
၄) စတုတ္ထပို့စ်က ကြယ်တစ်စင်းရဲ့အလင်းရောင်
ဒီပို့စ်ကတော့ ကျွန်မဘ၀ရဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုအကြောင်းရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါ .. ။
၅) နောက်ဆုံးပို့စ်ကတော့ Double Taxation Avoidance2ကျွန်မအပါအ၀င် စင်္ကာပူရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မတရားခံစားနေရတဲ့ အခွန်နဲ့ ရင်ထဲက စကားသံအချို့ကို ဖော်ပြထားတဲ့ ပို့စ်ပါ .. ။ ဒီလက်ရွေးစင်၅ခုပါပဲ .. ။ ကိုးန၀င်းကျေအောင် ထပ်ပြီး Tag လုပ်ခံရမယ့် မိတ်ဆွေဦးတွေက
၂) ခင်မင်တတ်တဲ့ ကိုဇင်ကိုလတ်
၃) မမ မယ်လိုဒီမောင်
၆) စည်းအပြင်က ကိုဖြိုး
၉) ကိုမျက်လုံး တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ………………. ။ Like this:Like Loading...
ညီမလေး လင်းလက်ရေ အဲဒါ ရေးပီးပီကွ ဒီမှာ ဖတ်ကွာ http://melodymaungmm.blogspot.com/2007/08/blog-post_3808.html
September 17, 2007 @ 6:34 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI